ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): အမှတ်တရဒီဇင်ဘာ
But I would like to advise you is not to wear like this infront of Buddha and the monks. This is not our relegious behaviour . Because you should be the "SAN PYA " of our younger generation who live in foreign countries. Whising you for the more and more brighter future ..More and more "Lin Let"
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် rose swe ရေ ။ ကျွန်မ အဲဒီနေ့က ၀တ်ထားတာက ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ကြီး မဟုတ်ပါဘူး ။ လက်ကလေးပြတ်တာပဲရှိတာပါ။ ဟိုက်ဟိုက်တွေ ခါးထွက်နေတာတွေ ရင်ဘတ်အရှေ့ဘက်ပိုင်းကတော့ လုံးဝလုံလုံခြုံခြုံ အပြည့်ါပပဲ ။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ။ အ၀ါဝတ်ချင်စိတ်ပေါက်တာနဲ့ အ၀ါဝတ်လိုက်တာပါ Thanks :)
... and also lots of "kalyāna-mittatā"